မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံများ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံများ စာရင်း
အောက်ပါတို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အလံများ ဖြစ်သည်။
၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်အလံ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အနီ ရေပြင်ညီလိုင်း ၃ လိုင်းနှင့် အလယ်တွင် ထောင့် ၅ ထောင့်ရှိသောကြယ်ဖြူကြီးတစ်လုံး
နိုင်ငံတော်အလံဒေါင်လိုက်ချိတ်ဆွဲပုံ အဝါရောင်လိုင်းကိုဘယ်ဘက်တွင်ရှိ‌စေရန်နှင့် ကြယ်ဖြူ၏ထိပ်ကိုလက်ဝဲဘက်သို့မျက်နှာမူစေရန် 
၂၀၁၀ ကချင်ပြည်နယ်အလံ အစိမ်းနုရောင်နောက်ခံ၊ အလယ်၌တောင်နှင့်မနောတိုင်ပုံ
ကယားပြည်နယ်အလံ အနီ၊ အပြာ၊ အစိမ်း ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်း၊ အလယ်၌ ကိန္နရီ/ကိန္နရာ ရုပ်ပုံ
၂၀၁၀ ကရင်ပြည်နယ်အလံ အပြာ၊ အဖြူ၊ အနီ ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်း၊ လက်ဝဲဖက်ထောင့်၌ ကြယ်အဖြူတစ်လုံး
၁၉၈၆ ချင်းပြည်နယ်အလံ အပြာ၊ အနီ၊ အစိမ်း ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်း၊ အလယ်၌စက်ဝိုင်းနှင့် အောက်ချင်းငှက်၊ ထိုစက်ဝိုင်းကိုဝန်းရံထားသော ကြယ် ၉ လုံး
၈ ဇွန် ၂၀၁၈ မွန်ပြည်နယ်အလံ အနီရောင်နောက်ခံနှင့် ရွှေဟင်္သာပုံ
ရခိုင်ပြည်နယ်အလံ အဖြူနှင့်အနီ ရေပြင်ညီမျဉ်းနှစ်ကြောင်း၊ အလယ်၌သီရိဝစ္ဆတံဆိပ်
၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၄၇ ရှမ်းပြည်နယ်အလံ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အနီ ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်းနှင့် အလယ်၌စက်ဝိုင်း
၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအလံ အဝါ၊ အပြာ၊ အနီ ရေပြင်ညီမျဉ်း ၃ ကြောင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးတံဆိပ်
၂၀၁၀ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအလံ အနီ၊ အပြာ၊ အစိမ်း ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်း၊ အလယ်၌ နဂါး ရုပ်ပုံ နှင့် ၎င်းအထက်တွင် ကြယ်ဖြူငယ်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအလံ အပြာရောင်နောက်ခံ၊ အလယ်တွင် အစိမ်းရောင်ဘောင်ရှိအဖြူရောင်စက်ဝိုင်းပေါ်၌ ရွှေဟင်္သာနှစ်ကောင်ဆင့်လျက်နေပုံ နှင့် ၎င်းအထက်တွင် "ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး" ဟူသော စာသား
၂၀၂၁ခန့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအလံ ရွှေဝါရောင်နောက်ခံနှင့် တိုင်းဒေသကြီးတံဆိပ်
၂၀၂၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအလံ ကောင်းကင်ပြာနောက်ခံနှင့် တိုင်းဒေသကြီးတံဆိပ်
၂၀၂၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလံ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အနီ ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးတံဆိပ်ပုံစံ
၂၀၂၂ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအလံ ကောင်းကင်ပြာနောက်ခံနှင့် တိုင်းဒေသကြီးတံဆိပ်
နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၏အလံ ကောင်းကင်ပြာနောက်ခံနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ၏တံဆိပ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားအလံများဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။
၂၀၁၇ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအလံ အပြာ၊ အဝါ ရေပြင်ညီမျဉ်းနှစ်ကြောင်း၊ အလယ်တွင် စက်ဝိုင်းအဖြူနှင့်ရှစ်မြှောင့်ကြယ်
ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအလံ အပြာ အဝါ၊ အစိမ်း ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်းနှင့် အလယ်တွင် စက်ဝိုင်းနီ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအလံ အစိမ်းရောင်နောက်ခံနှင့် အလယ်၌ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတံဆိပ်
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအလံ အပြာ၊ အဝါနှင့် အစိမ်းရောင် မျဉ်းသုံးကြောင်း၊ အလယ်၌ "ပြည်ထဲရေး" စာတန်း
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအလံ အနီရောင်နောက်ခံနှင့် အလယ်တွင် တပ်မတော်လိုဂို
တပ်မတော်အလံ အနီ၊ အဖြူ၊ အပြာနု ရေပြင်ညီမျဉ်း ၃ ကြောင်း၊ အလယ်၌ ရွှေရောင်ကြယ်
၂၀၁၅ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အနီ၊ အပြာရင့်၊ အပြာနု ရေပြင်ညီမျဉ်း ၃ ကြောင်း၊ အလယ်၌ တပ်မတော်တံဆိပ်နှင့် ကြယ်ငါးလုံး
၂၀၁၅ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အနီ၊ အပြာရင့်၊ အပြာနု ရေပြင်ညီမျဉ်း ၃ ကြောင်း၊ အလယ်၌ တပ်မတော်တံဆိပ်နှင့် ကြယ်လေးလုံး
၁၉၉၄ခန့် တပ်မတော် (ကြည်း) အလံ အနီရောင်နောက်ခံ၊ အလယ်၌ အပြာရင့်ရောင်မျဉ်းနှင့် ကြယ်ဖြူတစ်လုံး
၁၉၉၄ခန့် တပ်မတော်(ကြည်း)၏ တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားသုံး မြင်းစီးစစ်သည်ကိုင်အလံ တပ်မတော် (ကြည်း) အလံ ပုံစံကွဲ
၂၀၁၀ခန့် တပ်မတော် (လေ) ၏ လေတပ်အလံ မိုးပြာရောင်အောက်ခံတွင် ဘယ်ဘက်အထက်တွင် ကြယ်ဖြူနှင့်ညာဘက်ထောင့်တွင် လေတပ်အမှတ်တံဆိပ်
၁၉၉၄ တပ်မတော် (ရေ) ၏ ရေတပ်အလံ နောက်ခံအဖြူရောင်၏ ဘယ်ဘက်ထိပ်တွင်အနီရောင်နောက်ခံအကွက်၌ အဖြူရောင်ကြယ်နှင့်ညာဘက်အောက်ထောင့်တွင် အပြာရောင်ကျောက်ဆူး
တပ်မတော် (ရေ) တပ်တော်ဝင်အလံ
ကကပြည် ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ တပ်ဖွဲ့/ကျောင်းများ
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့အလံ အဝါ၊ အပြာ၊ အနီရောင် ဒေါင်လိုက်မျဉ်းများပေါ်တွင် ကြယ်တစ်လုံး
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့အလံမူကွဲ အနည်းငယ်ကျဉ်း‌သော အပြာရောင်အစင်း၊ လက်ဝဲအထက်ထောင့်၌ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏တံဆိပ်
၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့အလံ နောက်ခံအဖြူရောင်၏ ဘယ်ဘက်ထိပ်တွင်အပြာရောင်နောက်ခံအကွက်၌ အဖြူရောင်ကြယ်နှင့်ညာဘက်အောက်ထောင့်တွင် အပြာရောင်ကျောက်ဆူးနှစ်ခု
၁၉၅၆ သာသနာ့အလံတော် အပြာရင့်ရောင်၊ အဝါရင့်ရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင်၊ ပန်းနုရောင် ဒေါင်လိုက်မျဉ်းများနှင့် ထိုအရောင်ငါးမျိုးပေါင်းထားသောမျဉ်းတစ်ကြောင်း
ပန်းနုရောင်အစား ပန်းရောင်ကို အသုံးပြုသော မူကွဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလျာဏယုဝအသင်းအလံ ဝါ၊ စိမ်း၊ နီ သုံးရောင်ခြယ်နှင့် အဖွဲ့၏တံဆိပ်ပုံစံ
၁၉၅၄ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ အလံ အနီရောင်နောက်ခံ၊ လက်ဝဲဘက်အထက်ထောင့်၌ အစိမ်းရင့်အခန်း၊ ထိုအစိမ်းရင့်အခန်း၌ အစ္စလာမ်ဘာသာ‌ရေးစာသား
တအောင်းအမျိုးသားပါတီ၏အလံ ကောင်းကင်ပြာနှင့် အနီရောင်နေလုံး
၂၇ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၏အလံ ခွပ်ဒေါင်းအလံ
၂၇ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏အလံ အနီရောင်နောက်ခံ၊ ကြယ်ဖြူနှင့် ခွပ်ဒေါင်းရုပ်
၁၃၀၀ခန့် – ၁၅၀၀ခန့် ဟံသာဝတီခေတ်အလံတော်
၁၈၂၆ခန့် – ၁၈၈၅ ကုန်းဘောင်ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံအလံတော် အဖြူရောင်နောက်ခံ၊ အလယ်၌အနီရောင်စက်ဝိုင်းနှင့် ပန်းခက်ကိုက်ထားသောအစိမ်းရောင်ဒေါင်းရုပ်
၁၈၈၅ ထိ ကုန်းဘောင်ခေတ် မင်းခမ်းမင်းနားသုံးအလံ အဖြူရောင်ပိုးသား နှင့် အလယ်တွင် အနီရောင်ဒေါင်းရုပ်
၂၉ နိုဝင်ဘာ ၁၈၈၅ - ၁၉၄၂၊ ကိုလိုနီခေတ် နိုင်ငံတော်အလံ ဗြိတိသျှပြည်ထောင်စုဘုရင့်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အလံ ယူနီယံဂျက်။ ။ အင်္ဂလန်ပြည်၏ အလံ (နောက်ခံ အဖြူပေါ်တွင် စိန်ဂျော့၏ ကြက်ခြေနီ)၊ စကော့တလန်ပြည် အလံ (အပြာရောင် နောက်ခံပေါ်တွင် စိန်အန်ဒြူး၏ ဒေါင်လိုက် ကြက်ခြေဖြူ) နှင့် အိုင်ယာလန်ပြည် အလံ (အဖြူ ရောင် အောက်ခံပေါ်တွင် စိန်ပက်ထရစ်၏ ဒေါင်လိုက် ကြက်ခြေနီ) တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း
၁၉၄၅ - ၄ ဇန်နဝါရီ ၁၉၄၈
၁၈၈၆–၁၉၃၇ ဗြိတိသျှအိန္ဒိယအင်ပါယာ၊ မြန်မာပြည်နယ်၏ အရပ်သားအလံ ဗြိတိသျှအိန္ဒိယအင်ပါယာ၏ အမျိုးသားအလံနှင့် အရပ်သားအလံ ။ ။ အနီရောင်နောက်ခံ၊ လက်ဝဲဘက်‌အထက်ထောင့်၌ယူနီယံဂျက်၊ လက်ယာဘက်၌ သရဖူဆောင်းထားသော အိန္ဒိယကြယ်တံဆိပ်
၆ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ ၁၉၃၉ - ၁၉၄၁၊ ဗြိတိသျှမြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအလံ အပြာရင့်နောက်ခံ၊ လက်ဝဲဘက်အထက်ထောင့်၌ယူနီယံဂျက်၊ လက်ယာဘက်‌၌ဒေါင်းရုပ်
၁၉၄၅ – ၃ ဇန်နဝါရီ ၁၉၄၈
၁၉၄၁–၁၉၄၂  ဗြိတိသျှမြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအလံ အပြာရင့်နောက်ခံနှင့် အလယ်တွင်ဒေါင်းရုပ်
၁၉၄၂–၁၉၄၃ ဂျပန်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်မြန်မာနိုင်ငံအလံ ဂျပန်နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံတော်အလံ ။ ။ အဖြူရောင်နောက်ခံနှင့် အလယ်တွင်အနီရောင်စက်ဝိုင်း
၁ ဩဂုတ် ၁၉၄၃ – ၁၉၄၅ ဗမာနိုင်ငံတော်အလံ ဝါ၊ စိမ်း၊ နီ သုံးရောင်ခြယ်နှင့် ဒေါင်းရုပ်
၁၉၄၃ – ၁၉၄၅ ဗမာနိုင်ငံတော်အလံ ရိုးရှင်းပုံစံ ဝါ၊ စိမ်း၊ နီ သုံးရောင်ခြယ်နှင့် ဒေါင်းရုပ်
၄ ဇန်နဝါရီ ၁၉၄၈ – ၃ ဇန်နဝါရီ ၁၉၇၄ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်အလံ အနီရောင်နောက်ခံ၊ လက်ဝဲဘက်အထက်ထောင့်၌ အပြာရင့်အခန်း၊ ထိုအပြာရင့်အခန်း၌ ကြယ်ဖြူကြီးနှင့် ၎င်း၏ရောင်ခြည်လက်များထဲ၌ ကြယ်ငယ် ၅ လုံး
နိုင်ငံတော်အလံကို ထောင်လိုက်ချိတ်ဆွဲပုံ  အပြာရင့်ရောင်အခန်းကို လက်ဝဲဘက်အထက်ထောင့်တွင်ရှိစေရန်နှင့် ၎င်းအခန်းအတွင်းရှိကြယ်များ၏ထိပ်ဖျားသည် လက်ဝဲဘက်သို့ညွှန်ပြနေ‌စေရန်
၁၉၅၂–၁၉၇၄ ပြည်​ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ​တော်ဆိုင်ရာ အရပ်သားသ​​​င်္ဘောသုံးအလံ နိုင်ငံတော်အလံပါ အပြာရင့်ခန်းကို အလျားအပြည့်ထိချဲ့ထား
၄ ဇန်နဝါရီ ၁၉၇၄–၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈၊ ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်အလံ အနီရောင်နောက်ခံ၊ လက်ဝဲဘက်အထက်ထောင့်၌ အပြာရင့်အခန်း၊ ထိုအပြာရင့်အခန်း၌ စပါးနှံနှင့်စက်သွားတို့ကို ဝန်းရံနေသောကြယ်ငယ် ၁၄ လုံး
၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈ – ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်အလံ
၁၉၇၄–၁၉၈၈ ပြည်​ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ​တော် အရပ်သားသင်္ဘောသုံးအလံ နိုင်ငံတော်အလံပါ အပြာရင့်ခန်းကို အလျားအပြည့်ထိချဲ့ထား
၁၉၈၈–၂၀၁၀ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ‌တော်ဆိုင်ရာ အရပ်သားသင်္ဘောသုံးအလံ
၁၈၈၅–၁၉၃၇ အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်၏အလံ ယူနီယံဂျက်အလယ်၌ ဗြိတိသျှအိန္ဒိယတံဆိပ်
၁၉၃၇–၁၉၄၈ ဗြိတိသျှမြန်မာပြည်ဘုရင်ခံ၏အလံ ယူနီယံဂျက်အလယ်၌ ဒေါင်းရုပ်ပုံစံ
၁၉၄၂–၁၉၄၃ ဒေါက်တာဘမော်၏ ဆင်းရဲသားဝံသာနုအဖွဲ့အစိုးရ
၁၉၄၈–၁၉၆၂ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်သမ္မတသုံးအလံ လိမ္မော်ရောင်နောက်ခံနှင့် အလယ်၌ဒေါင်းရုပ်
၁၉၄၈–၁၉၇၄ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစိုးရသင်္ဘောသုံးအလံ အပြာရင့်ရောင်နောက်ခံနှင့် လက်ဝဲဖက်ထောင့်၌ နိုင်ငံတော်အလံ
၁၉၉၂–၂၀၁၂ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ၏ အလံပုံစံ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံတော်
၁၉၄၉ နန်ကျင်းမြို့ကို တရုတ်ကွန်မြူနစ်တပ်နီများဝိုင်းထားချိန်တွင် နန်ကျင်းမြို့ရှိ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသံရုံးတွင် လွှင့်ထူသော အလံ  ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံ၏ လက်ယာဘက်၌ နန်းမြို့ရိုးပြာသာဒ်ပုံ ဖြည့်ဆွဲထားခြင်း
၂၀၁၀ အထိ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အလံဟောင်း အပြာနု၊ အနီ၊ အပြာရင့် ရေပြင်ညီမျဉ်း ၃ ကြောင်း၊ အလယ်၌ ရွှေရောင်ကြယ်
၂၀၁၁–၂၀၁၄ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အလံဟောင်း ၂၀၁၀ အလံကို ၂၀၁၀ နိုင်ငံတော်အလံ၏ အချိုးအစားပုံစံကဲ့သို့ပြောင်းထား
၁၉၄၈ – ၁၉၉၄ခန့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) အလံဟောင်း တပ်မတော် (ကြည်း) အလံဟောင်း ပုံစံကွဲ
၁၉၄၈–၁၉၇၄ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) အလံဟောင်း  နက်ပြာရောင်နောက်ခံနှင့် အလယ်တွင် လေတပ်အမှတ်အသား
သတ္တရုမြဇမ္ဗူ ၁၇၈၄ခန့် – ၁၈၈၅ ကုန်းဘောင်ခေတ် မြန်မာဘုရင့်တပ်မတော်၏ ကြည်းကြောင်းချီအလံများ ရွှေ‌ရောင်နောက်ခံနှင့် အလယ်တွင်အနီရောင်စက်ဝိုင်းပေါ်ရှိ ရွှေရောင်ဒေါင်းရုပ်
သတ္တရုဇေယ ရွှေရောင်နောက်ခံနှင့် အလယ်တွင်အစိမ်းရောင်စက်ဝိုင်းပေါ်ရှိ နို့နှစ်ရောင်ယုန်ရုပ်
မဟာသတ္တရု နို့နှစ်ရောင်နောက်ခံပေါ်တွင် လက်နှစ်ဖက်တွင်လက်နက်ကိုင်လျက်မြှောက်နေသောဘီလူးရုပ်
သတ္တရုဇမ္ဗူ အနီ၊ နို့နှစ်ရောင်၊ အနီ ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်းနှင့် နို့နှစ်ရောင်မျဉ်းထဲတွင် အနီရောင်အနားသတ်ခြင်္သေ့ရုပ်
ရွှေပြည်လက်ဝဲ အနီ၊ အပြာရင့်၊ အနီ ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်း
ရွှေပြည်ဝရဇိန် အပြာရင့်၊ အနီ၊ အပြာရင့် ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်း
ရွှေပြည်တမွတ်စံ အနီ၊ အစိမ်းရင့်၊ အနီ ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်း
ရွှေပြည်စက်ထိ အဝါ၊ အဖြူ၊ အဝါ ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်း
ရွှေပြည်တံဆိပ် အစိမ်း၊ အဝါ၊ အစိမ်း ရေပြင်ညီမျဉ်းသုံးကြောင်း
၁၈၅၃–၁၈၇၆ ကုန်းဘောင်ခေတ်အမြောက်တပ်ရင်း၌ အနောက်တိုင်းသားများအသုံးပြုသည့်အလံ အနီရောင်နောက်ခံနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုယ်စားပြု ကြက်ခြေခတ်
၁၉၄၁ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (ဘီအိုင်အေ) ပထမအလံ အဖြူရောင်နောက်ခံနှင့် အနီရောင်ဒေါင်းရုပ်
၁၉၄၂ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (ဘီအိုင်အေ) ဒုတိယအလံ အစိမ်းရောင်နောက်ခံ၊ အလယ်၌ဒေါင်းရုပ်နှင့် ထောင့်များ၌မိုးကြိုးများ
သုံးရောင်ခြယ် ၁၉၄၂ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (ဘီအိုင်အေ) တတိယအလံ ဝါ၊ စိမ်း၊ နီ၊ သုံးရောင်ခြယ်နှင့်ဒေါင်းရုပ်
၁၉၄၂ ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (ဘီဒီအေ) အလံ ဝါ၊ စိမ်း၊ နီ၊ သုံးရောင်ခြယ်နှင့်ဒေါင်းရုပ်
တော်လှန်ရေးအလံ ၁၉၄၅ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးပြောက်ကျားများ၊ ဗမာ့အမျိုးသားတပ်မတော်နှင့် မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော်အလံ အနီရောင်နောက်ခံ၊ လက်ဝဲဖက်ထောင့်၌ကြယ်ဖြူ 
၁၉၄၈-၁၉၉၄ခန့် တပ်မတော် (ကြည်း) အလံဟောင်း အနီရောင်နောက်ခံ၊ အလယ်၌ အပြာရင့်ရောင်မျဉ်းနှင့် ၎င်းမျဉ်းထဲ၌ ကြယ်ဖြူငယ်တစ်လုံး
၁၉၄၈–၁၉၇၄ ပြည်​ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ​ ရေတပ်အလံဟောင်း စိန့်ဂျော့၏ကြက်ခြေခတ်ပုံစံ၊ လက်ဝဲဖက်ထောင့်၌ နိုင်ငံတော်အလံ၏ အပြာရင့်ခန်းနှင့်ကြယ်လုံးများ
၁၉၇၄–၁၉၉၄ ပြည်​ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ​တော် ရေတပ်အလံဟောင်း အပြာနုနှင့်အပြာရင့် ရေပြင်ညီမျဉ်းနှစ်ကြောင်း၊ အလယ်၌ကြယ်ဖြူ
၁၉၄၈–၁၉၇၄ တပ်မတော်(လေ) အလံဟောင်း  ကောင်းကင်ပြာနောက်ခံ၊ လက်ဝဲဖက်အထက်ထောင့်၌ နိုင်ငံတော်အလံ၊ အလံညာဖက်၌ လေတပ်အမှတ်အသား
၁၉၇၄–၂၀၁၀ခန့် တပ်မတော်(လေ) အလံဟောင်း  အပြာရင့်‌ရောင်နောက်ခံ၊ လက်ဝဲဖက်အထက်ထောင့်၌ ကြယ်ဖြူ၊ အလံညာဖက်၌ လေတပ်အမှတ်အသား
၂၀၀၂ခန့် အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အလံဟောငး
၁၉၇၄–၂၀၁၀ ကယားပြည်နယ်၏ အလံဟောင်း
၂၀၁၀ထိ ကချင်ပြည်နယ်၏ အလံဟောင်း
၁၉၇၄ – ၈ ဇွန် ၂၀၁၈ ထိ မွန်ပြည်နယ်၏ အလံဟောင်း အပြာရောင်နောက်ခံ၊ အလယ်တွင် ဟင်္သာအဝါနှင့် မွန်ပြည်နယ်စာတမ်း
၂၀၁၀ အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်း၏ အလံဟောင်း အစိမ်းရောင်နောက်ခံ၊ အလယ်တွင် ခြင်္သေ့ရုပ်နှင့် အထက်၌ စစ်ကိုင်းတိုင်းစာတမ်း
၂၀၁၀ – ၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်း၏ အလံဟောင်း အနီရောင်နောက်ခံ၊ အလယ်တွင် ခြင်္သေ့ရုပ်နှင့် အထက်၌ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစာတမ်း
၂၀၁၀ အထိ တနင်္သာရီတိုင်း၏ အလံဟောင်း
၁၉၇၄–၂၀၁၀ ပဲခူးတိုင်း၏ အလံဟောင်း
၂၀၁၀ – ၂၀၁၉ ခန့် အထိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ အလံဟောင်း
၂၀၁၀ အထိ မကွေးတိုင်း၏ အလံဟောင်း
၂၀၁၀-၂၀၂၁ခန့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအလံ ရွှေဝါရောင်နောက်ခံနှင့် တိုင်းဒေသကြီးတံဆိပ်ဟောင်း(၂၀၁၀-၂၀၂၁ခန့်)
၂၀၁၀ အထိ မန္တလေးတိုင်း၏ အလံဟောင်း
၂၀၁၀–၂၀၂၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ အလံဟောင်း အနီရောင်နောက်ခံနှင့် တိုင်းဒေသကြီးတံဆိပ်
၂၀၁၀ အထိ ရန်ကုန်တိုင်း၏ အလံဟောင်း အပြာရင့်ရောင်နောက်ခံနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတံဆိပ်
၂၀၁၁–၂၀၂၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ အလံဟောင်း ကောင်းကင်ပြာနောက်ခံနှင့် တိုင်းဒေသကြီးတံဆိပ်
၂၀၁၀ အထိ ဧရာဝတီတိုင်း၏ အလံဟောင်း
၂၀၁၀–၂၀၂၂ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ အလံဟောင်း အဖြူရောင်နောက်ခံနှင့် တိုင်းဒေသကြီးတံဆိပ်
၁၉၃၀–၁၉၃၅ တို့ဗမာအစည်းအရုံး၏ သုံးရောင်ခြယ်အလံ ဝါ၊ စိမ်း၊ နီ သုံးရောင်ခြယ်
၁၉၄၅–၁၉၅၈ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်အလံ အနီရောင်နောက်ခံ၊ လက်ဝဲဖက်ထောင့်၌ကြယ်ဖြူ
၁၉၃၉–၁၉၄၆၊ ၁၉၄၆–၁၉၇၀ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏အလံ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗမာပြည်)၏အလံ
၁၉၆၂–၁၉၈၈ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ၏အလံ အနီရောင်နောက်ခံ၊ လက်ဝဲဖက်ထောင့်၌ကြယ်ဖြူနှစ်လုံး
၂၀၀၆ ၂၀၀၆ ခုနှစ် အမျိုးသားညီလာခံ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွင် အဆိုပြုအလံ
၂၀၁၉ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တင်သွင်းသော အဆိုပြုအလံ အနီရောင်နောက်ခံနှင့် လက်ဝဲဖက်ထောင့်၌ အပြာရင့်အခန်း၊ ထိုအခန်းတွင် ကြယ်ဖြူကြီးတစ်လုံးနှင့် ဝန်းရံနေသော ကြယ်ဖြူငယ် ၁၄ လုံး
၂၀၁၉ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တင်သွင်းသော အဆိုပြုအလံ
၂၀၁၉ အမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ တင်သွင်းသော အဆိုပြုအလံ ကာကီရောင်နောက်ခံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏မြေပုံ
၂၀၁၉ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တင်သွင်းသော အဆိုပြုအလံ အပြာရောင်နောက်ခံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏မြေပုံ
↑ President Obama Promises Support for the People of Burma (19 November 2012)။
↑ "ချင်းပြည်နယ်အလံဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ ဒေါက်တာတမ်အောင်လိန်းကွယ်လွန်" (in မြန်မာဘာသာ)၊ Zalen Media၊ 20 November 2020။
↑ "Mon State Hluttaw approves picture of golden hamsa on red background as Mon State flag" (in en)၊ Burma News International၊ 8 June 2018။ 21 August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "စစ်ကိုင်းတိုင်းအလံနှင့်လိုဂိုအသစ် ယခုနှစ်အတွင်းပြောင်းလဲအသုံးပြုမည်" (in မြန်မာ)၊ ဧရာဝတီ၊ ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉။
↑ "ဓနုအမျိုးသားနေ့နဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံသတ်မှတ်"၊ ဘီဘီစီ၊ ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇။
↑ "Myanmar army chief tells rebels to stop demanding 'impossible'"၊ Bangkok Post၊ ၂၇ မတ် ၂၀၁၈။
↑ Burmese Flags (Myanmar) from The World Flag Database. Flags.net (21 October 2010). Retrieved on 2011-05-27.
↑ အောင်ကိုဦး။ "မန္တလေးတွင် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ" (in မြန်မာဘာသာ)၊ မဇ္ဈိမ၊ ၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇။
↑ Myanmar (Burma): Police flags။ CRW Flags။
↑ အရှင်စန္ဒောဘာသ (ရွှေဘို) (၁၃၅၇)။ သာသနာ့အလံတော်။ ရွှေပုရပိုက်စာပေ။
↑ YMBA အသင်းသူ/သားများအနေဖြင့် YMBA ဗဟိုအမှုဆောင်များအား ကြိုတင်အသိပေးတင်ပြခြင်းမရှိဘဲ မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် မီဒီယာများကိုဖြေကြားခွင့်မပြု။ People Media (၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁)။
↑ Islamic Religious Affairs Council Myanmar
↑ ဝရဇိန် (ဆရာစံမြေ) (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁)။ မြန်မာ့သမိုင်းဝင်အလံများနှင့် မြန်မာခေါင်းဆောင်မျာ။
↑ စာမျက်နှာ ၆၊ ဒုတိယပိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ခေတ်အဆက်ဆက်သတ်မှတ်အသုံးပြုခဲ့သော နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်များနှင့် နိုင်ငံတော် အလံများ
တင်ပြသူ = ဒေါ်ရီရီညွန့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ် စစ်ကိုင်း၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
↑ မစ္စတာမောင်မှိုင်း (၁၉၁၄)။ ဒေါင်းဋီကာ။
↑ ဗန်းမော်တင်အောင်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်သမိုင်း။
↑ နိုင်ငံတော်အလံအား ချစ်ခင်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပါ။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ Burma Celebrates Independence 1948 (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ British Pathé။ 1948။ VLVA9I02D6F29HT6UH95ALQGCYMK။
↑ ၂၀.၀ ၂၀.၁ ၂၀.၂ Hubert de Vries (27 March 2012)။ Myanmar Burma Part 2။
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ မောင်အုန်းဖေ (မေ ၂၀၀၄)။ ဒီဟာအစ ဒီလိုဗျ။
↑ ၂၂.၀ ၂၂.၁ ၂၂.၂ ၂၂.၃ ဗိုလ်အေးမောင် (၁၉၅၅)။ နိုင်ငံတော်အလံနှင့်နေ့ထူးများ THE NATIONAL FLAG AND THE SIGNIFICANT DAYS OF THE UNION OF BURMA။ ရန်ကုန်မြို့: ဘာသာပြန်စာပေအသင်း။
↑ ၂၃.၀ ၂၃.၁ ၂၃.၂ ၂၃.၃ ၂၃.၄ ၂၃.၅ ၂၃.၆ Pedersen၊ Christian Fogd (1971)။ Bedells၊ John (ed.)။ The International Flag Book in Colour (Englishဘာသာစကားဖြင့်)။ London။ p. 72။ ISBN 07137 0536 1။ CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
↑ ၂၄.၀ ၂၄.၁ ၂၄.၂ ၂၄.၃ Hubert de Vries (11 June 2010)။ Myanmar Burma Part 1။
↑ နိုင်ငံတော်အလံသစ် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအလံသာဖြစ်။ ဘီဘီစီ (၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀)။
↑ ဒီမိုကရက်တစ် တရားမျှတမှုကို ကိုယ်တိုင် ကျင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့ တရားဝန်ကြီးချုပ် (13 August 2010)။
↑ ၂၇.၀ ၂၇.၁ ၂၇.၂ ၂၇.၃ Hubert de Vries (5 April 2012)။ Myanmar Burma Part 3။
↑ "Senior General Than Shwe in India to discuss trade and security"၊ PIME AsiaNews၊ ၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၀။
↑ Sean Gleeson။ "Whatever happened to the tyrant Than Shwe?"၊ Southeast Asia Globe၊ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၇။
↑ နတ်မောက် ဘုန်းကျော် (March 2014)။ ရှေးခေတ်မြန်မာ့တပ်မတော်မှတ်စုများ။
↑ Jowett၊ Phillip (25 June 2020)။ Windrow၊ Martin (ed.)။ Japan’s Asian Allies 1941–45။ Osprey publishing။ p. 17။
↑ Jowett၊ Phillip (25 June 2020)။ Windrow၊ Martin (ed.)။ Japan’s Asian Allies 1941–45။ Osprey publishing။ p. 27။
↑ Barraclough၊ E.M.C (1966)။ Flags of the World။ Great Britain: Frederick Warne။
↑ Jane၊ Fred T (2004)။ Saunders၊ Stephen (ed.)။ Jane's Fighting Ships (2004-2005) (107th ed.)။ p. 488။ ISBN07106 2623 1။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံ၏_အလံများ_စာရင်း&oldid=746139" မှ ရယူရန်
၅ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၁၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၁၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။